ယောက်ျားလေးရဲ့ hoodie LY20-074
စတိုင်နံပါတ် .: LY20-074 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းနောက်ကျောတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
ယောက်ျားလေးရဲ့ hoodie LY20-073
စတိုင်နံပါတ် .: LY20-073 အရောင်: မီးခိုးရောင် Melange အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းနောက်ကျောတွင်တပ်ဆင်ထားသည်၊ 310gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: hood drawcord အသွင်အပြင်: လည်စည်းဆေးမှတ်ချက်များ: နေရာချထားမှုပုံနှိပ်
ပုံစံအမှတ်: LY20-002 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 100% ဝါဂွမ်းနောက်ကျောအပေါ် brushed, 300gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ယက်တိပ်အသွင်အပြင်: gradient ကိုသိုးစုပုံနှိပ်မှတ်ချက်မှတ်ချက်: နေရာချထားပုံနှိပ်
စတိုင်နံပါတ် .: FM-1329 အရောင်: အနီရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 65% polyester 35% ဝါဂွမ်းနောက်ကျောအပေါ်ခြယ်ထားသော, 280gsm Accessory: Drawcord, elastic tape, woven tape, woven label မှတ်ချက်: သိုးစုပုံနှိပ်
စတိုင်နံပါတ်: FM-1315 အရောင်: မီးခိုးရောင် Melange အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 65% polyester 35% ဝါဂွမ်းနောက်ကျောအပေါ် brushed, 280gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Drawcord, elastic တိပ်, ယက်တံဆိပ်မှတ်ချက်: နေရာချထားပုံနှိပ်
ယောက်ျားလေးရဲ့ hoodie FM-1312
စတိုင်နံပါတ်: FM-1312 အရောင်: အနီရောင် / အဖြူရောင် / ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 65% polyester 35% ဝါဂွမ်းနောက်ကျောအပေါ်ခြစ်, 280gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း
စတိုင်နံပါတ်: FK20-07 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 6-14A အထည်: 65% polyester 35% ဝါဂွမ်းနောက်ကျောအပေါ် brushed, 280gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Drawcord, Snap ခလုတ်မှတ်ချက်များ: နေရာချထားပုံနှိပ်
စတိုင်နံပါတ်: FK20-06 အရောင်: မီးခိုးရောင်မဲလန်းဂါအရွယ်အစား: 6-14A အထည်: 65% polyester 35% ဝါဂွမ်းနောက်ကျောအပေါ် brushed, 280gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Drawcord, Snap ခလုတ်မှတ်ချက်များ: နေရာချထားပုံနှိပ်
ယောက်ျားလေးရဲ့ hoodie BJ015
စတိုင်နံပါတ် .: BJ015 အရောင်: မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်အရွယ်အစား: ၈-၁၆A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းနောက်ကျောတွင်တပ်ထားသော၊ ၃၀၀ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Drawcord, Eyelet, Woven tape မှတ်ချက်။
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded အင်္ကျီ SH-1018
Style No .: SH-1018 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester 75D အတုမှတ်ဉာဏ်ယက်ထည်; ကိုယ်ထည်: Bejirog သားမွေး; ပါးပျဉ်းနံရံ: 210T; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည်ထိုးခင်း 280g ဆက်စပ်ပစ္စည်း - ဆီလီကွန်တံဆိပ်၊ elastic binding, ပိုက်ကြိုး၊ ရေစိုခံ Zip
Boy's padded jacket YY-2932
Style No .: YY-2932 အရောင်: Navy / Silver / Yellow အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ယက်ထည်ထည်; အရောင်; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည် 120g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ဆီလီကွန်တံဆိပ်၊ ပုံနှိပ်ထားသောပွင့်လင်းမြင်သာသောတိပ်ခလုတ်၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်ပါမှတ်ချက်များ။ ရှေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပွင့်လင်းမြင်သာသောယက်တိပ်ဖြင့်ရိုက်ခြင်း
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded ဂျာကင်အင်္ကျီ YY-2917
စတိုင်နံပါတ် .: YY-2917 အရောင်: အပြာရောင် / တော်ဝင်အပြာရောင် / ငွေရောင်အရွယ်အစား: 8-16A အထည်: Shell: 100% polyester ယက်ထည်ထည်; အရောင်; ကိုယ်ထည်: Bejirog သားမွေး; လက် / ပါးပျဉ်းနံရံ: 210T; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည်ထိုးခင်း ၂၈၀ ဂဂဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက်များ - ၁ လက် ၁ ချည်ထိုးနံရံကပ်နံရံကပ်လက်နှင့် ceve လက်အိတ်